‘रानाभाटलाई ७० लाख’ : विश्वकप खेल्ने दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली रेल चढेर पाकिस्तान, हाम्रो नेपालमा ! – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
‘रानाभाटलाई ७० लाख’ : विश्वकप खेल्ने दृष्टिविहीन क्रिकेट टोली रेल चढेर पाकिस्तान, हाम्रो नेपालमा !
प्रकाशित: २०७४ पुष १९ गते १९:०७
काठमान्डौं । ‘देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वकप क्रिकेट खेल्न नेत्रहीन टोली प्लेनको टिकेट किन्ने पैसा नहुँदा रेलबाट पाकिस्तान तिर लागेछ । यता, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले राज्यकोषबाट ७० लाख पाएछन्’ यो एक जना चिन्तक रतन भण्डारीले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लेखेको ‘संशोधित’ स्टाटस हो । उनले कडा शब्दमा स्टाटस खेलेका छन् ।